Mid kamid ah Raggi Burcad Badeeda ugu Caansana oo la dilay – Radio Daljir
Mid kamid ah Raggi Burcad Badeeda ugu Caansana oo la dilay
Maarso 20, 2019 11:54 b 0
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil 18-kii bishan gobolka Mudug loogu geystay nin lagu magacaabi jiray Axmed Maxamuud Maxamed oo loo yaqaanay (Garaad) oo ka mid ahaa ragii ugu caan sanaa burcad badeedii Soomaalida.
Sida wararku sheegayaan Garaad waxaa lagu dilay deegaanka Golfuula, isagoo xiligaasi ka yimid degmada Hobyo, wuxuuna ku sii jeeday magaalada Gaalkacyo.
Koox hubeysan ayaa ninkan iyo qof kale oo la socday kala dagay gaari ay dad Shacab ah saarnaayeen, iyagoo markii danbe soo daayay ninka Garaad la socday oo la tilmaamay inuu ahaa Darwalkiisa, waxeyna markii danbe xili habeen ah ay dileen Axmed Maxamuud Maxamed (Garaad).
Marxuum Garaad oo da’diisa 50 sano jir aheyd ayaan la ogeyn cida dishay, balse dadkii yaqaanay waxey sheegeen in ninkan uu waday abaabul ku aadan sidii Koox burcad badeed ah looga sameyn lahaa gobolka Mudug, taasoo ay ka diideen dadka maalgashanayay dekeda Hobyo, waloow uu go’aankiisa ku adkeystay.
Ninkan la dilay ayaa 14-kii bishii hore la keenay Muqdisho, isagoo dalka Iiraan ku soo qaatay Sagaal sano oo xabsi ah, iyadoo la qabtay sanadkii 2010, xiligaas oo uu hormuud u ahaa Koox Burcad badeed ah oo isku dayeysay iney Afduubato markab laga leeyahay dalka Iiraan, waxaana dagaalka saacado socday ku geeriyooday muwaadin u dhashay dalka Iiraan oo markabka saarnaa.
Maraykanka oo lagu eedeyeey inay dad shacab ah ku dileen Somaaliya
Somaliland oo dusha loo saaray khasaaraha ka dashay Colaada Gobalka Sanaag (Daawo)